३५ जिल्लाका २७० शिक्षकलाई १० दिने आइसिटि तालिम – Makalukhabar.com
२०७७ जेष्ठ १८, आईतवार ०९:५७
३५ जिल्लाका २७० शिक्षकलाई १० दिने आइसिटि तालिम
मकालु खबर	 May 20, 2020 मा प्रकाशित 10 0
चितवन । नेपाल शिक्षक सङ्घ चितवन जिल्ला कार्यसमितिले शिक्षकहरूका लागि १० दिने सूचना प्रविधियुक्त सिकाइ अनलाइन तालिम सञ्चालन गरेको छ । ३५ जिल्लाका २७० शिक्षकहरूले दिनको तीन घण्टाका दरले तालिम लिएका थिए । सोमबार नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले १० दिने तालिमको समापन गरेका हुन् । समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले कोरोना महामारीले शिक्षकहरूको काँधमा थप जिम्मेवारी थपिदिएको बताए ।
अब विद्यार्थीलाई मात्रै पढाएर शिक्षकको जिम्मेवारी पुग्ने नदेखिएको भन्दै उनले शिक्षकले अब भयभीत समाज र बाटो बिराएको राजनीतिलाई पनि सही सन्देश दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘अभिभावकहरूलाई कोरोनाको महामारीको सही सन्देश सुनाउनुहोस्, राजनीतिक नेताहरूले सही बाटो देखाउनुहोस्, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बालबालिकालाई शैक्षिक र मानसिक सिकाइ गर्नुहोस्’ उनले लामो समय शिक्षण संस्था पूर्णतः बन्द गरेर राख्न नहुने बन्दै सरकाले परीक्षणको दायरा बढाएर बिस्तारै शिक्षण संस्था विभिन्न विकल्पहरूमा खुला गर्दै जानुपर्ने बताए ।
यस्तै, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले कोरोना कहरका बिच खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै चितवन सङ्घले रचनात्मक काम गरेकोमा प्रशंसा गरे । गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने भन्दै शिक्षकहरू आफैले आफ्नो क्षमता बढाउन प्रयास गर्नु अनुकरणीय भएको बताए ।
नेपाल शिक्षक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष देवेन्द्र उपाध्यायले शिक्षकले नै शिक्षकको क्षमता बढाउने, सूचना प्रविधि सिकाउने पहल थाल्नु राम्रो कुरा भएको भन्दै चितवन सङ्घलाई धन्यवाद दिए । सरकारले गर्नुपर्ने, अझ सङ्घीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने काम जिल्लाका शिक्षकहरूले गर्नु प्रशंसनीय भएको उनको धारणा थियो । शिक्षक सङ्घका सङ्घीय समितिका उपमहासचिव सुन्दर पन्तले चितवन जिल्लाले ३५ जिल्लाका शिक्षकहरूलाई १० दिने सूचना प्रविधि तालीम दिएर उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै धन्यवाद दिए ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद कँडेलले लकडाउनमा बसिरहेका शिक्षकलाई मानसिक ताजगी सँगै थोरैभएपनि क्षमता विकास होस् भनेर तालीम आयोजना गरिएको बताए । प्रतिकूलतामा पनि सकारात्मकता र सिर्जनाको खोजी गर्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम आयोजना गरिएको र त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै डा. कँडेलले सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिए । तालीममा सहभागी शिक्षकहरूले भने १० दिने तालीमले आफूहरूलाई नयाँ जीवन दिएको भन्दै आयोजकलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
सहभागी लमजुङका शिक्षक राजीव पण्डितले पहिले आफूलाई मोबाइलमा फोन गर्न, गीत सुन्न र सामाजिक सञ्जाल चलाउन मात्रै मिल्छ भन्ने लागे पनि तालीमपछि यसबाट विद्यार्थीलाई सिकाउन, गृहकार्यदिन, शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न मिल्ने कुरा जानेको बताए । अब सिकेको सीप कक्षाकोठा र विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । कलिका कन्या मन्दिर मावि बागलुङकी शिक्षक हुमा रिजालले तालीमले आफूलाई नयाँ जुनी पाएको अनुभव भएको बताइन् । मोबाइलमा फोन उठाउन मात्रै जानेकी थिएँ, अब यसबाट सिकाउन र शैक्षिक सामग्री बनाउन पनि जानेँ–उनले भनिन् । स्याङ्जाकी शिक्षक सीता गैरेले तालिमबाट धेरै कुरा सिकेको बताइन् । मोबाइल र ल्यापटप भए घरमैबसेर पनि सिकाउन सकिने रहेछ भन्दे उनले सिकेको सप्को व्यवहारिक प्रयोग गर्ने बताइन् ।
नीलकण्ठ मावि धादिङका प्रअ ध्रुव अधिकारीले पहिले सूचना प्रविधिमा थोरै मात्र ज्ञान भए पनि तालिमपछि फराकिलो बनेको भन्दै अब सिकाइमा यसको भरपुर प्रयोग गर्ने बताए । जमुनीया मावि बर्दियाका प्रअ कुमार प्रसाद सापकोटाले सूचना प्रविधिको ज्ञान पाएपछि बल्ल आफूलाई वास्तविक रूपमा शिक्षक भएको अनुभव मिलेको बताए । चितवनका शिक्षक विनोद अधिकारीले तालिमले मोबाइल र ल्यापटपबाटै प्रश्न पत्र, नतिजा, सिकाइ सामाग्री, विषयगत क्वीज, पावरप्यान्ट निर्माणगर्नेलगायतका धेरै काम गर्न सकिने कुरा सिकाएको बताए ।
शिक्षक सङ्घशिक्षकसूचना प्रविधियुक्त सिकाइ
कोरोना संक्रमित फेला परेपछि मैतिदेवी क्षेत्र सिल